नेपाल आज | नेपालमा ‘ग्लोबल सेटलाइट टेलिभिजन’ चलाउने सपना छ ( भिडियोसहित)
नेपालमा ‘ग्लोबल सेटलाइट टेलिभिजन’ चलाउने सपना छ ( भिडियोसहित)
चिरञ्जिवि देवकोटा नेपाली टेलिभिजनका चर्चित पत्रकार हुन् । इमेज च्यानल, नेपाल वान सगरमाथा, न्यूज २४ हुँदै उनी हाल अष्ट्रेलियाको एक कम्युनिटी टिभीमा कार्यरत छन् । आफनो व्यक्तित्व, प्रस्तुती, रिर्पोटिङ तथा लेखन र सम्पादनबाट नेपाली मिडियामा छाएकाबेला एक्कासी उनी सबै काम छोडेर अष्ट्रेलियातर्फ लागे ।
नेपाली संचारमाध्यमबाट अलग भएर विदेश जानुको कारणबारे उनी भन्छन्, ‘ टीभीमा काम गरेको १२ वर्ष भन्दा बढी समय भैसकेको थियो । म आफैलाई ‘ब्रेक’ चाहिएको थियो । केही समय आफनै क्षमताको विकास र परिवारलाई पनि समय दिनुपर्ने थियो । पत्रकारितासंग सम्बन्ध विच्छेद गरेको होइन । म अष्ट्रेलियामा पनि अहिले पनि मिडियामै क्रियाशिल छु । ’
उनका अनुसार अष्ट्रेलियामा डेढ लाख भन्दा बढी नेपाली छन् । त्यहाँ परिश्रमको कदर हुन्छ । कामको उचित पारिश्रमिक पाइन्छ । मुख्यतः त्यहाँ ‘सिष्टम’ छ । नेपालीहरुले अष्ट्रेलियामा राम्रो काम गरेर पैसा र ख्याती दुवै कमाएका छन् । एकाध केही घटना होलान्, त्यसका आधारमा नेपाली खराब भए, दुःख पाए भन्न मिल्दैन ।
‘सामान्यतः एउटा टेलिभिजनमा काम गरेर मैले मेरो जीवन राम्रोसंग चलाएको छ । परिवार पालेको छु, समाजसेवामा खर्च गर्न सकेको छु र केही बचत पनि गरेको छु । यो भन्दा अरु को चाहियो ? ’ देवकोटा भन्छन् ।
हालै काठमाडौंमा सम्पन्न गैर आवासिय नेपाली संघको नवौं विश्व सम्मेलनमा सहभागी हुन उनी अष्ट्रेलियाबाट नेपाल आएका हुन् । सम्मेलनमा भएका केही अराजक गतिविधिबाट भने उनी खिन्न छन् ।
उनी भन्छन्, ‘ संघका निवर्तमान अध्यक्ष भवन भट्टको जहाज काण्ड नै यसको मुल जड हो । भट्टले आफनो जहाज काण्डबारे अहिलेसम्म सफाइ दिएका छैनन् । सम्मेलनका दौरान पनि केही व्यक्तिले अशोभनिय काम गरे, यसप्रति हामीलाइ पनि लज्जाबोध भएको छ । यसले सबैको बेइज्जत भयो । विदेशमा बाँधेर राखेको साँढे नेपालमा आएर उफ्रे जस्तो भयो ।’
नेपाली संचारमाध्यम संख्यात्मकरुपमा बढेसंगै गुणात्मकरुपमा पनि फड्को मार्ने स्थितिमा पुग्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालका मिडिया र पत्रकार अली अपरिपक्व जस्तो लाग्न थालेको छ । मिडियामात्र होइन देश नै कमेडीतर्फ गैरहेको भान हुन्छ । निकै सस्ता र उत्ताउला कुराले प्रश्रय पाउनु मिडियाको दोष हो । यस्ता कुरालाई गम्भीर मानेर धारणा बनाउनु अर्को गल्ती हो । यो कुरालाई सच्याउनैपर्छ ।
अब नेपालका संचारमाध्यम ‘विकासका मुद्दा’ मा केन्द्रीत हुनुपर्छ । राजनीतिक घटनाक्रम र नेताहरुका भाषणलाई कम गर्नुपर्छ । मानिसमा प्रेरणा जगाउने, विकाससंग जोडिएका विषयवस्तुलाई प्राथमिकता दिने तथा राज्यलाई नै विकासको नयाँ आँखा दिनेसक्ने सामग्री बनाउनतर्फ संचारमाध्यम लाग्नुपर्छ ।
देवकोटा भन्छन्, ‘ विदेशबाट हेर्दा नेपाल बाकस जस्तो देखिन्छ । कसैले अंग्रेजीमा केही विषयमा लेखेर अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यममा आए थाहा हुने हो नत्र त केही थाहा हुन्न । नेपाल भित्र नेपाली भाषामा जति बोले पनि बाहिर त्यसको केही प्रभाव पर्दैन । विदेशमा रहेकाहरु अनभिज्ञ नै रहन्छन् । यही कुरालाई बुझेर मैले एउटा सपना साँचेको छु । नेपालमा ‘ग्लोबल सेटलाइट टीभी’ खोल्ने । यसले संसारभरका समाचारलाई एकीकृत गरी एकैपटक विश्वभर उनीहरुकै ‘प्राइम टाइम’ मा प्रसारण गर्ने । तत्काल त सम्भव नहोला तर भविश्यमा यो दिन चाँडै आउने छ भन्नेमा म आशावादी छु । ’
नेपालमा पत्रकारिताको उच्चतम विकास भएकाले कसैले पनि स्वतन्त्रता पत्रकारिताको अधिकार खोस्न सक्दैन । यसको अर्थ पत्रकारले जे पनि गर्न पाउँछ भन्ने होइन । पत्रकार र संचार गृहले पनि आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ । के रामबहादुरको टाउको श्यामबहादुरको शरीरमा जोडेर प्रसारण गर्नु उचित हो ? बिना तथ्य कसैको चरित्र हत्या गर्नु जायज हो ? यो कुरा कसैले पनि जायज मान्दैन । तर, नेपालमा यस्तो भैरहेको छ । यस्ता विकृती र कमजोरी भने हटाउनै पर्छ ।
जुन देशमा गए पनि आफू नेपाली नै रहने र आफनै जन्मभूमी नेपालका लागि काम गर्ने बताउने देवकोटालाई भने एउटा ठूलो पश्चाताप छ । उनी भन्छन्, ‘ २०७२ सालामा भूकम्प गएकाबेला म नेपालमा भइन । त्यो बेला मलाई नेपाल नहुँदाको पीडाले एकदमै सतायो । एउटा संचारकर्मीका हिसाबले आफूले पुर्याउन सक्ने योगदान निर्वाह गर्न नपाएकाले भित्रभित्रै निकै पोल्यो । त्यो बेला म नेपालमा भएको भए केही सम्झिनयोग्य काम गर्ने थिए जस्तो लाग्छ । ’
नेपाल पर्यटन बोर्डद्वारा अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यका लागि ‘एचपीआरआर’ तोकिएका देवकोटा पर्यटन प्रवद्र्यनका लागि समेत काम गरिरहेका छन् ।